Shirkada facebook o tar tan kaga furmay Tik Tok walaac badana qabta | Biyoguurenews.com
Home Wararka Shirkada facebook o tar tan kaga furmay Tik Tok walaac badana qabta
Shirkada facebook o tar tan kaga furmay Tik Tok walaac badana qabta
Tech Tent ayaa toddobaadkan sheegtay facebook inuu loollanka adag uu kala kulmayo adeegga baraha bulshada ee lagu wada xiriiro TikTok.
Toddobaadkan laba arrimood oo muhiim ah ayaa ka soo ifbaxay TikTok, lacagta la yaabka leh uu TikTok sameeyo mulkiilaha facebook Mark Zuckerberg oo isna u arkay inuu TikTok yahay mid tartan adag kula jira ganacsigiisa.
Sawir ay wakaaladda Reuters baahisay ayaa wuxuu muujinayaa mulkiilaha TikTok Byte Dance inuu helay dakhli u dhaxeeya $7 bilyan ilaa iyo $8 bilyan oo doolar lixdi bilood ee ugu horreysay sanadkan.
Sanadki hore xilligan oo kale qasaaro ayey la kulantay balse sanadkan faa’ido lama filaan ah ayey soo hooysay.
Mark Zuckerberg ayaa isaguna aaminsan inuu tartan adag uu Facebook ka soo wajahay dhanka TikTok.
Cod sir oo laga duubay shir ay shaqaalaha facebook ka yeesheen arrintan oo lagu baahiyey bogga tech new site wuxuu shaqaalahiisa u sheegay sida uu TikTok uu si xowli ah uu ugu soo kobcayo.
“Waa barnaamijki internetka oo ugu horreeyey oo ay sameyso shirkadda weyn oo dhinaca teknooloojiyadda oo laga leeyahay dalka Shiinaha taasoo si weyn u qabsatay dunida. Billowgeedaba waxaa ka muuqda horumar fiican waxayna si wacan looga soo dhaweeyey Mareykanka, gaar ahaanna dhalinyarada yaryarka ah. Dalka Hindiyana si weyn ayuu ugu meel maray. Marka waxaad moodda sida uu Instagram hadda ka hor uu caan ugu noqday si la mid ah inuu ku socdo. Haa waa dhacdo soo jiidasho leh.”
TikTik siduu dhalinyarada ula weyn yahay?
Arrinta waxaan ku yara iftiimiey hadal aanka jeediyey dugsiga South Wales dhawr toddobaad ka hor. Wuxuu si layaab leh uu u soo jiitay dhalinyarada ay balwadda u tahay isticmaalka baraha bulshada. Sida ay Facebook hadda ka hor tartan ugu hayeen Snapchat iyo Instagram ayuu Facebook loollanka kala kulmayaa TikTok. Shirkadda AppAnnie oo baaritaan ku sameyso barnaamijyada taleefannada gacanta la isticmaalo ayaa waxay sheegtay iney hayso caddeymo muujinaya koritaanka xowliga ee TikTok.
Khabiir falanqeeyo teknooloojiyadda Yurub Paul Barnes wuxuu BBC u sheegay dadka ka baxsan dalka Shiinaha ee taleefannada Smart isticmaalo iney 1.1. bilyan oo saacadood ay itsicmaaleen bishi August oo keli ah, taasoo ka dhigan marka sanadki hore xilligan oo kale la barbar dhigo 400% uu sare u kacay.
Wuxuuna intaa ku daray heerka ka go’naashaha dadka isticmaala TikTok ay walwal ku abuurto baraha kale ee ay bulshada ku wada xiriirto waa suuragal.
Balse waxaa loo baahan yahay iney maanka ku hayaan Muuqaal fiican oo TikTok inuu u baahan in wakhti badan la geliyo halka ay baraha kale inaad sawir geliso ama sawir ku tuurto ay fududdahay.
Hase yeeshee, TikTok waxaa lagu dhaleeceeyaa inuu ammaankiisa uu sugneen oo uu u baahan yahay wax ka qabasho.
Baaritaan ay BBC sanadkan TikTok ku sameysay ay ku ogaatay inuu ku guul darreystay iney xirto cinwaanno ay dhalinyaro ka hadleysay xadgudubyo jinsi iyo galmo la xiriira ku baahiyey TikTok.
Laakiin waxaa shaki kujira in malaayiinta qof ee isticmaala TikTok ee Yurub iyo Mareykanka midkood ay yaqaannaan ama ka warqabaan in TikTok ay tahay shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha.
Previous articleBerbera, Xuska Macalinka o Berbera lagu qabtay
Next articleMaalqabeen boqolaal Muslimiin ah isxambaar ku geeyay Canada